Linux 5.12 inouya nekuwanda kwekutsigira kusimudzira, madhiraivha, kutsigirwa zviri pamutemo kweN64 uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi miviri yekuvandudza, Linus Torvalds akazivisa kuburitswa kweLinux kernel 5.12, vhezheni umo shanduko dzinonyanya kuzivikanwa dzinosanganisira rutsigiro rwemazone block zvishandiso muBtrfs, kugona mepu emushandisi IDs kufaira masystem, KFENCE kugadzirisa hurongwa hwekuona zvikanganiso kana uchishanda neyekuyeuka, pakati pevamwe.
Shanduro nyowani akagamuchira 14170 fixes kubva kune vagadziri ve1946, saizi yechigamba iri 38MB (shanduko dzakakanganiswa mafaera 12102 (12090), yakawedzera 538599 (868025) mitsara yekodhi, yakabvisa 333377 (261456) mitsara).
Main nyowani maficha eLinux 5.12
Iko kugona kwemamepu emushandisi IDs eakaiswa mafaera masisitimu akaitwa. Mepu ndeye inowirirana neFS FAT, ext4 uye XFS, izvo zvinoita kuti mashandiro anoita arambe achiita kuti zvive nyore kugovana mafaera pakati pevashandisi vakasiyana uye pamakomputa akasiyana, kusanganisira mepu yekushandisa mune systemd-homed dhairekitori yekushandisa.
Chimwe chinhu chitsva ndechekuti iyo faira system Btrfs inowedzera rutsigiro rwekutanga rwemazone block zvishandiso. Mune yekuverenga-chete maitiro, rutsigiro rwunopihwa mabhuroko ane metadata uye dhata idiki pane peji rimwe (subpage).
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo iko kugona kwekuvaka kernel neiyo Clang compiler kwakaitwa pamwe nekuisirwa kwe optimizations mudanho rekubatanidza (LTO, Link Nguva Optimization). Semuenzaniso, neLTO, inline deployment inokwanisika kumabasa kubva kune mamwe mafaera, isina kushandiswa kodhi haina kuiswa mune inoitisa faira, mhando yekutarisa uye yakajairika optimization inoitwa padanho reprojekiti seyakazara. LTO rutsigiro parizvino rwakaganhurirwa kune x86 uye ARM64 zvivakwa.
Mukuwedzera akawedzera nvmem mutyairi kuti agamuchire data kubva kunzvimbo dzekurangarira dzakachengetedzwa ne firmware izvo zvisingawanikwe zvakananga kuLinux (semuenzaniso, EEPROM ndangariro inowanikwa panyama chete ye firmware kana data rinowanikwa chete padanho rekutanga kurodha).
Kune rimwe divi, zvinoratidzwa izvo KFence yekudzivirira mashandiro akawedzerwa (Kernel Electric Fence), inoona zvikanganiso kana uchishanda neyekuyeuka, senge buffer inopfachukira uye kuwana mushure mekusunungura ndangariro. Kusiyana neiyo KASAN yekugadzirisa nzira, iyo sisitimu KFence inosiyaniswa nekukwirira kwayo kwepamusoro uye yakaderera yepamusoro mitengo.
Iyo Integrity Measurement Architecture (IMA) subsystem, iyo inochengetedza dhatabhesi yeheshes kuratidza kuvimbika kwemafaira uye yavo inosangana metadata, ikozvino yave nekwanisi yekuona kuvimbika kweiyo kernel's data, semuenzaniso kuteedzera shanduko mumitemo yeSELinux.
Iye hypervisor KVM ikozvino inokwanisa kubata Xen hypercalls uye wozvitumira kumushandisi nzvimbo emulator.
Wakawedzera kugona kushandisa Linux semidzi midzi yeiyo Hyper-V hypervisor sezvo iine mukana wakanangana ne Hardware uye inoshandiswa kumhanyisa masisitimu evashanyi (akafanana neDom0 paXen). Kusvika parizvino, Hyper-V (Microsoft Hypervisor) yaingotsigira Linux munzvimbo dzevaenzi, asi iyo hypervisor pachayo yaigoneswa kubva kuWindows-based nharaunda.
Mutungamiriri amdgpu inoshandisa kugona kudarika (OverDrive)tSienna Cichlid GPU-yakavakirwa makadhi (Navi 22, Radeon RX 6xxx).
Mutungamiriri i915 yeIntel Graphics inoshandisa i915.mitigations paramende kuremadza kuzviparadzanisa uye nzira dzekudzivirira mukufarira kuita kuri nani. Zvemachips kutanga kubva Tiger Lake, VRR bracket inosanganisirwa (Variable Rate Refresh), iyo inobvumidza iwe kuti uchinje shanduko yekuzorodza yekutarisa kuti uone kutsetseka uye pasina kuputsa panguva yekutamba. Inosanganisira kutsigirwa kweIntel Yakajeka Ruvara Tekinoroji kusimudzira kurongeka kwemavara.
Mutungamiriri Nouveau Inowedzera Initial Rutsigiro rweNVIDIA GPUs Kubva paGA100 Architecture (Ampere). Iyo msm driver inowedzera rutsigiro rweAdreno 508, 509, uye 512 GPUs anoshandiswa mu SDM (Snapdragon) 630, 636, uye 660 machipisi.
Wakawedzera rutsigiro rweRuzha BlasterX AE-5 Plus, Lexicon I-ONIX FW810s, uye Pioneer DJM-750 makadhi eruzha. Wakawedzera rutsigiro rweIntel Alder Lake PCH-P odhiyo sisitimu.
Zvakare, zvakare mune iyi itsva vhezheni yeLinux 5.12 Tsigiro yeNintendo 64 mutambo wekunyaradza waitwa wepamutemo yakagadzirwa pakati pa1996 na2003 (yapfuura kuyedza kuisa Linux kuNintendo 64 yakanga isina kukwana uye yaive nemamiriro eVaporware).
Yakawedzerwa tsigiro yeLenovo IdeaPad chikuva nekwanisi yekugadzirisa inoteedzana mutoro uye keyboard backlighting. Iyo zvakare inotsigira iyo ACPI mbiri yeiyo ThinkPad chikuva ine masimba manejimendi kugona. Wakawedzera mutyairi weLenovo ThinkPad X1 Tablet Gen 2 HID subsystem.
Yakawedzerwa rutsigiro rweARM mabhodhi, zvishandiso uye mapuratifomu: PineTab, Snapdragon 888 / SM8350, Snapdragon MTP, Two Beacon EmbeddedWorks, Intel eASIC N5X, Netgear R8000P, Plymovent M2M, Beacon i.MX8M Nano, NanoPi M4B.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux 5.12 inouya nekuvandudzwa kwakawanda kwekutsigira, madhiraivha, rutsigiro rwepamutemo rweN64 uye nezvimwe
Microsoft inotanga kuyedza rutsigiro rwekushandisa Linux GUI kunyorera paWindows